XOG: Goorma ayay shaqo bilaabi doonaan Guddiga Farsamada, Puntland oo walaac siyaasadeed qabta.
August 2, 2020 NEWS 6
MUQDISHO(P-TIMES) – Guddiga Farsamo ee Hanaanka Turxaan-bixinta howlaha Doorashooyinka Soomaaliya ayaa si rasmi todobaadkan dhamaadkiisa u bilaabi doono wada hadaladooda ku wajahan arrimaha Doorashooyinka, waxayna diyaarinayaan tubta doorasho lagu qanacsan yahay oo ay hordhigaan shirka Madaxda dawlad gobaleedyada & DF Soomaaliya.
Guddigan, oo ay soo magacaabeen dhammaan madaxda dawlad gobaleedyada iyo Dawladda Faderaalka Soomaaliya, waxay diiradda saarayaan arrimaha doorashooyinka sidii ay iskugu raaci lahaayeen, xili ay wali jirto kla aragti duwanansho.
Dawlad gobaleedyada Jubbaland & Puntland ayaa qabashada doorasho la mid ah tii dhacday 2016-kii oo lagu kordhiyo oo kaliya dadka codeynaya 50 qof, kuna qabsoonta caasumadaha dawlad gobaleedyada.
Laakiin aragtidaas waxaa diidan dawlad gobaleedyada kale iyo dawladda Faderaalka Soomaaliya oo xooga saaraysa in ay codeeyaan ugu yaraan 280kun oo ah shacab Soomaaliyeed oo ay xaq u yeeshan in ay codkoda dhiibtaan oo ay doortan cida ay raban.
Shacabkan waxaa kamid ah kuwa aan laheyn matalaad baarlamaan, balse codkooda kaga biirinaya xildhibaanada deeganadooda laga doorto, iyadoo ay taasi hortaagan yihiin dawlad gobaleedyada qaarkood.
Puntland & Jubbaland waxay doonayaan in beel kasta ay soo xulato ergadeeda, ayna sidaas ku doortaan xildhibanka beeshooda, balse caqabadaha ka hor imaanaya waxaa kamid ah dhinacyada dawlad gobaleedyada iyo dawladda Faderalka oo ka awood badan doona.
Xogaha la helayo, waxay cadeynayan in ay durba bilowday Puntland, niyadxumo siyaasadeed oo ku wajahan natiijooyinka ka imaan doona wada hadaladan, waxaana Madaxweynaha Puntland Siciid Deni uu xubno katirsan siyaasiinta mandiqadaas oo la kulmay habeen ka hor u muujiyey rajo quus siyaasadeed ah.
Guddiga Farsamada oo dhanka dawladda Faderaalka lasoo xulay xubno ad adag oo horey u gorfeeyey wada hadaladii doorashooyinka 2016kii, haddana waxay xooga saarayaan sidii ay dawlad gobaleedyada kale u kasban lahaayeen, xili ay Puntland ku mashquulsan tahay walaac siyaasadeed.
Waxa aan malqi jiray, “neef gawracani geedo kama waabto!”
Maamulka GUNUUC-LAND (ee naxashka saaran) waxa ugu war danbaysay iyaga oo nafla caarigii ku hadaaqay, “beesha lixaad hanna soo gaadho bal in ay nafta nagu soo celin karaan maadaama uu mashiinkii Dhuusa-mareeb shaqayn waayey.” Hadda waxa ay ka dhur sugayaan beesha lixaad, allaa kariim.
Qoladan Gunuunucland ee aad intaas ka gunuunucaysid sida hadaladaada ka muuqata mar walba dhib weyn bay ku gaarsiiyeene, bal saaxiibow ma nooga sheekayn kartaa waxay kugu sameeyeen oo uur-ku-taalada intaas le’eg kugu reebtay. Mise ereyo aadan jeclayn sida “Laan gaab” oo kale bay kugu dheheen.
It makes me to remember that,the song Eric Clapton ” Why you Worry”!
Deni muxuu la welwelayaa? Maxaa welwelka gaarka ku beeray?
Marka Arrin ama Xaajo dad badan ka dhexeysa laga wada hadlaayo inta badan waxaa xalku noqdaa meesha loo badan yahay.
Halkaas waxaa iiga soo baxay markaan eegay ama fiiriyey in Deni meel cidla taagan yahay waayo wuxuu wataa Feker uusan u heli karin cid ka Iibsaneysa,taas oo muujineysa inuu Go’doon yahay Deni!
Why you worry!?
Muriidi- adiga shaanshi saw ma tihid (sida magacaaga ka muuqata) maxaa iila yoomaysaa?!
Qoraagu muxuu ku ogaaday in ay maamuladu, hirshabeele galmudug ,w, Somali in ay isku mawqif yihiin farmaajo waxaan ogeeyn waare oo yiri farmaajo kadaa fuustada duleesha ee aad biyaha ku dhureeyso, adeer farah wax badan baad soo joogtey taariikhda Somalia hadda ba ha degdegin hanna u dardaar walin nin waayo soo joogay oo ogaa guurka hooyada iyo waliba dhalashadaadii, hadalkaan, hadal baa xigi…
Dadka Qaar Ciicdii Baa Ka Dhamaatay,
Walwal Iyo Walbahaar Baa Iskugu Darsamay,
Beesha Caalamku Hana Soo Gaadho Ayey Kaga Dhagtay,